चीन उच्च दबाव पानी धुंध प्रणाली एफएम अनुमोदित (१) कारखाना र आपूर्तिकर्ता Anbesec
उच्च दबाव पानी धुंध प्रणाली एफएम स्वीकृत (१)
वाटर मिस्टलाई एनएफपीए 750० मा पानीको स्प्रेको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसको लागि Dv0.99, पानीको थोपा पानीको थोपा न्यूनतम डिजाइन अपरेटिंग दबावमा 1000 माइक्रोन भन्दा कम छ। पानी धुंध प्रणाली एक उच्च प्रेशर मा काम गर्दछ एक राम्रो atomised धुंध को रूप मा पानी पुर्‍याउन। यो धुंध चाँडै भापमा रूपान्तरण हुन्छ जसले आगोलाई मुस्कुराउँछ र यसमा पुग्न अक्सिजनलाई रोक्दछ। उही समयमा वाष्पीकरणले महत्त्वपूर्ण शीतलन प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
पानी धुंध सिद्धान्त
हो पानी धुवाँ NFPA 750 मा पानी स्प्रे को रूप मा परिभाषित गरीएको छ जसको लागि Dv०.99, पानीको थोपा पानीको प्रवाह-भारित संचयी भोल्युमेट्रिक वितरणको लागि, पानी धुंध नोजलको न्यूनतम डिजाइन अपरेटिंग दबावमा १००० माइक्रोन भन्दा कम छ। पानी धुंध प्रणाली एक उच्च प्रेशर मा काम गर्दछ एक राम्रो atomised धुंध को रूप मा पानी पुर्‍याउन। यो धुंध चाँडै भापमा रूपान्तरण हुन्छ जसले आगोलाई मुस्कुराउँछ र यसमा पुग्न अक्सिजनलाई रोक्दछ। उही समयमा वाष्पीकरणले महत्त्वपूर्ण शीतलन प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
पानीमा उत्कृष्ट तातो अवशोषण गुणहरू छन् जसले। Excellent8 केजे / किग्रा अवशोषित गर्छन्। र २२57 केजे / किग्रा। भापमा रूपान्तरण गर्न, अधिक १ approximately००: १ विस्तार मा त्यसो गर्दा। यी सम्पत्तीहरूको शोषण गर्न, पानीको थोपाहरूको सतह क्षेत्र अनुकूलित गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको ट्रान्जिट समय (सतहहरूमा हिर्काउनु अघि) अधिकतम हुनुपर्दछ। त्यसो गर्दा, सतह ज्वलनशील आगोको दमनको संयोजनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ
१ आगो र ईन्धनबाट तातो निकासी
२ स्टीम स्मोटरिंगबाट फ्याम फ्रन्टमा अक्सिजन रिडक्शन
3 उज्ज्वल ताप स्थानान्तरण रोकिदै
।। दहन ग्यासको शीतलन
आगो बाँच्नका लागि, यो 'आगो त्रिकोण' को तीन तत्वहरूको उपस्थितिमा निर्भर गर्दछ: अक्सिजन, तातो र दहनशील सामग्री। यी कुनै पनि तत्वहरूको हटाउनाले आगो निभाउँनेछ। एक उच्च दबाव पानी धुंध प्रणाली पछि जान्छ। यसले आगो त्रिकोणको दुई तत्त्वहरूलाई आक्रमण गर्दछ: अक्सिजन र ताप।
उच्च दबावको पानी धुवाँ प्रणालीमा एकदमै सानो थोपाहरू तुरुन्तै यति उर्जा लिन्छन् कि बूँदहरू वाफ हुन्छ र पानीबाट भापमा परिवर्तन हुन्छ, किनभने पानीको सानो सतहको तुलनामा सतह क्षेत्र उच्च छ। यसको मतलब यो छ कि प्रत्येक ड्रपलेट लगभग १00०० पटक विस्तार हुन्छ, जब दहनशील पदार्थको नजिक पुग्छ, जहाँ अक्सिजन र दहनशील ग्यासहरू आगोबाट विस्थापित हुनेछन्, यसको अर्थ दहन प्रक्रियामा अक्सिजनको अभाव हुनेछ।
आगोसँग लड्न, पारम्परिक स्प्रिंकलर प्रणालीले दिइएको क्षेत्रमा पानीको थोपा फिँजाउँछ, जसले कोठालाई चिसो पार्न ताप ताप दिन्छ। तिनीहरूको ठुलो आकार र तुलनात्मक रूपमा सानो सतहको कारण, बूँदको मुख्य भाग वाष्पीकरण गर्न पर्याप्त उर्जा लिन सक्दैन, र तिनीहरू चाँडै पानीको रूपमा भुइँमा खस्छन्। परिणाम सीमित कूलि effect प्रभाव हो।
यसको विपरित रूपमा, उच्च-दबाव पानी धुवाँ मा धेरै साना थोपा हो, जो अधिक बिस्तारै खस्छन्। पानीको धुवाँको थोपा ठूलो सतह क्षेत्र हुन्छ यसको मासको सापेक्ष र भुइँतिरको सुस्त तलतिर उनीहरू अझ धेरै ऊर्जा लिन सक्छन्। पानीको एक ठूलो मात्राले संतृप्ति रेखालाई पछ्याउँदछ र वाफ हुन्छ, जसको मतलब पानीको धुंधले वरिपरिबाट धेरै उर्जा लिन्छ र यस प्रकार आगो हुन्छ।
त्यसकारण उच्च दबावको पानी धुवाँ प्रति लिटर पानी अधिक कुशलतापूर्वक चिसो: एक परम्परागत स्प्रिंकलर प्रणालीमा प्रयोग गरिएको एक लिटर पानीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा सात गुणा राम्रो।
पानी धुवाँ NFPA 750 मा पानी स्प्रे को रूप मा परिभाषित गरीएको छ जसको लागि Dv०.99, पानीको थोपा पानीको प्रवाह-भारित संचयी भोल्युमेट्रिक वितरणको लागि, पानी धुंध नोजलको न्यूनतम डिजाइन अपरेटिंग दबावमा १००० माइक्रोन भन्दा कम छ। पानी धुंध प्रणाली एक उच्च प्रेशर मा काम गर्दछ एक राम्रो atomised धुंध को रूप मा पानी पुर्‍याउन। यो धुंध चाँडै भापमा रूपान्तरण हुन्छ जसले आगोलाई मुस्कुराउँछ र यसमा पुग्न अक्सिजनलाई रोक्दछ। उही समयमा वाष्पीकरणले महत्त्वपूर्ण शीतलन प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
१.3 उच्च दबाव पानी धुवाँ प्रणाली परिचय
उच्च दबाव पानी धुंध प्रणाली एक अद्वितीय फायर फाइटिंग प्रणाली हो। पानीलाई अत्यधिक दबाबमा माइक्रो नोजलमार्फत पानीको धुवाँ बनाउने सबैभन्दा प्रभावशाली अग्निशमन ड्रप आकार वितरणको साथ पानी बाध्य पार्नुहोस्। बुझाउने प्रभावहरूले चिसो गरेर इष्टतम सुरक्षा प्रदान गर्दछ, तातो शोषणको कारण, र inerting पानीको विस्तारको कारण करीव १,7०० पटक यसको बाफ हुँदा।
१3.१ कुञ्जी घटक
विशेष डिजाइन-पानी धुंध नोजल
उच्च दबाव पानी धुंध नोजल अद्वितीय माइक्रो नोजल को तकनीक मा आधारित छन्। तिनीहरूको विशेष रूपको कारण, पानी घुमाउरो कोठामा कडा रोटरी गति प्राप्त गर्दछ र अत्यन्त चाँडै पानीको धुवाँमा परिणत हुन्छ जुन ठूलो वेगमा आगोमा धकेल्छ। ठूलो स्प्रे ए angle्गल र माइक्रो नोजल्सको स्प्रे बान्कीले उच्च स्पेसि high सक्षम गर्दछ।
नोजल टाउकोमा बनेका थोपाहरू १००-१२० बारको दबाबको प्रयोग गरेर सिर्जना गरिन्छ।
गहन अग्नि परीक्षणको साथसाथै मेकानिकल र सामग्री परीक्षणहरूको एक श्रृंखला पछि, नोजल्स विशेष रूपमा उच्च-दबाव पानी धुवाँको लागि बनाईन्छ। सबै परीक्षणहरू स्वतन्त्र प्रयोगशालाहरू द्वारा गरिन्छ ताकि अपतटीयको लागि पनि कडा मागहरू पूरा हुन्छन्।
गहन अनुसन्धानले विश्वको सब भन्दा हल्का र अधिक कम्प्याक्ट उच्च-दबाव पम्पको सिर्जनामा ​​नेतृत्व गरेको छ। पम्पहरू मल्टि-अक्षीय पिस्टन पम्पहरू हुन्छन् जुन प्रतिरोध प्रतिरोधात्मक स्टेनलेस स्टीलमा गरिन्छ। अनौंठो डिजाइनले पानीलाई एक स्नेहकको रूपमा प्रयोग गर्दछ, यसको मतलब नियमित सेवा र ल्युब्रिकन्टहरू बदल्नु आवश्यक पर्दैन। पम्प अन्तर्राष्ट्रिय प्याटेन्ट द्वारा सुरक्षित छ र व्यापक रूपमा बिभिन्न खण्डहरूमा प्रयोग गरिन्छ। पम्पहरूले 95%% उर्जा क्षमता र धेरै कम पल्सेशन प्रस्ताव गर्दछ, जसले गर्दा आवाज कम हुन्छ।
अत्यधिक जंग प्रूफ वाल्भहरू
उच्च-दबाव वाल्भ स्टेनलेस स्टील बाट बनेको छ र अत्यधिक जंग प्रूफ र फोहर प्रतिरोधी हो। मनिफोल्ड ब्लक डिजाईनले भल्भहरूलाई धेरै कम्पेक्ट बनाउँदछ, जसले तिनीहरूलाई स्थापना र अपरेट गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछ।
१3२ उच्च दबाव पानी धुंध प्रणाली को लाभ
उच्च दबाव पानी धुंध प्रणाली को फाइदाहरू असीम छन्। कुनै रासायनिक योजक प्रयोग नगरीकन र पानीको न्यूनतम खपत बिना र पानीलाई नोक्सानी नपुर्‍याईकन, सेकेन्डमा आगोलाई नियन्त्रणमा राख्ने / राख्ने क्षमता, यो वातावरणमैत्री र कुशल अग्निबाण प्रणाली उपलब्ध छ, र यो मानव जातिको लागि पूर्ण सुरक्षित छ।
पानीको न्यूनतम प्रयोग
Water सीमित पानी क्षति
Accident दुर्घटनात्मक सक्रियताको असम्भावित घटनामा न्यूनतम क्षति
A पूर्व-कार्य प्रणालीको लागि कम आवश्यकता
• एक लाभ जहाँ पानी लिनको दायित्व हुन्छ
Reser एउटा जलाशय विरलै चाहिन्छ
• स्थानीय सुरक्षाले तपाईंलाई द्रुत फायर फाइटिंग प्रदान गर्दछ
Fire कम डाउनटाइम कम आगो र पानीको क्षतिको कारण
Market बजार सेयर गुम्ने जोखिम कम भएको छ, किनकि उत्पादन चाँडै माथि छ र फेरि चालु छ
• दक्ष - तेल आगोसँग लड्नको लागि पनि
• कम पानी आपूर्ति बिल वा करहरू
सानो स्टेनलेस स्टील पाइप
• मर्मत मुक्त
Easier सजिलो निगमनका लागि आकर्षक डिजाइन
• उच्च गुणस्तर
• उच्च स्थायित्व
Piece टुक्रा-काममा लागत प्रभावी
Quick द्रुत स्थापनाको लागि फिटिंग थिच्नुहोस्
• पाइपहरूको लागि कोठा पाउन सजिलो
Ret retrofit गर्न सजिलो
Nd झुकाउन सजिलो
• केही फिटिंग आवश्यक छ
Ool शीतलक क्षमताले आगोको ढोकामा शीशा विन्डोको स्थापनालाई सक्षम गर्दछ
• उच्च स्पेसिing
W केही नोजल - वास्तुगत आकर्षक
Fficient दक्ष शीतलता
Ow विन्डो कूलि - - सस्तो गिलासको खरीद सक्षम गर्दछ
• छोटो स्थापना समय
Est सौन्दर्य डिजाइन
१. एफएम वर्ग 60 5560० - पानी धुने प्रणालीहरूको लागि कारखाना पारस्परिक स्वीकृति
२. NFPA 5050० - संस्करण २०१०
२ SYSTEM विवरण र घटकहरू
HPWM प्रणाली एक धेरै दबाव जल स्रोत (पम्प इकाइहरु) मा स्टेनलेस स्टील पाइपिंग द्वारा जोडिएको धेरै नोजल मिलेर बनेको छ।
एचपीडब्ल्यूएम नोजल सटीक ईन्जिनियर गरिएका उपकरणहरू हुन्, जुन पानीको धुवाँलाई डिस्चार्ज गर्नको लागि प्रणाली अनुप्रयोगमा निर्भर गर्दछ जुन आगो दमन, नियन्त्रण वा बुझाईलाई सुनिश्चित गर्दछ।
2.3 सेक्सन भल्भहरू - नोजल प्रणाली खोल्नुहोस्
सेक्शन भल्भहरू पानीको धुंध आगो निभाउने प्रणालीलाई व्यक्तिगत आगो सेक्सनहरू छुट्याउन प्रदान गरिन्छ।
संरक्षित गर्नका लागि प्रत्येक खण्डका लागि स्टेनलेस स्टीलले निर्मित सेक्सन भल्भहरू पाइप प्रणालीमा स्थापनाको लागि आपूर्ति गरिन्छ। सेक्सन भल्भ सामान्यतया बन्द र खुला हुन्छ जब आगो निभाउने प्रणाली सञ्चालन गर्दछ।
एक सेक्शन भल्भ व्यवस्था एकै पटकमा धेरै गुणा सँगै समूहबद्ध गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि सम्बन्धित नोजलहरूमा व्यक्तिगत पाइपिंग स्थापना हुन्छ। सेक्शन भल्भहरू उपयुक्त स्थानहरूमा पाइप प्रणालीमा स्थापनाको लागि ढीला आपूर्ति गर्न सकिन्छ।
सेक्शन भल्भहरू संरक्षित कोठाबाहिर अवस्थित हुनुपर्दछ यदि अन्य मापदण्ड, राष्ट्रिय नियम वा अधिकारीहरू द्वारा निर्धारित गरिएको छैन।
सेक्सन भल्भ्स साइजिंग प्रत्येक व्यक्तिगत सेक्सन डिजाइन क्षमतामा आधारित छ।
प्रणाली सेक्सन भल्भहरू एक विद्युत संचालित मोटर चालित भल्भको रूपमा आपूर्ति गरिन्छ। मोटर चालित संचालित सेक्सन भल्भलाई अपरेशनको लागि सामान्यतया २0० VAC संकेत आवश्यक पर्दछ।
भल्भ एक प्रेसर स्विच र पृथक भल्भको साथ पूर्व-भेला हुन्छ। पृथक वाल्भहरू निगरानीको विकल्प अन्य भेरियन्टहरूको साथ पनि उपलब्ध छ।
2.4 पम्प एकाइ
पम्प एकाईले १०० बार र १ bar० पट्टी बीच एकल पम्प प्रवाह दर १००l / मिनेटको बीचमा सञ्चालन गर्दछ। पम्प प्रणालीहरूले एक वा बढी पम्प एकाइहरू पानीको धुंध प्रणालीमा एक गुणा मार्फत जडित प्रणाली डिजाइन आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ।
2.4.1 इलेक्ट्रिकल पम्पहरू
जब प्रणाली सक्रिय हुन्छ, केवल एउटा पम्प सुरू हुन्छ। एक भन्दा बढी पम्प समाहित प्रणालीहरूको लागि, पम्पहरू क्रमबद्ध रूपमा सुरू हुनेछ। अधिक नोजल्सको उद्घाटनको कारण प्रवाह बढ्नु पर्छ; अतिरिक्त पम्प (हरू) स्वचालित रूपमा सुरु हुनेछ। प्रणाली प्रवाहको साथ प्रवाह र अपरेटिंग प्रेशर स्थिर राख्नको लागि आवश्यक सबै पम्पहरू मात्र सञ्चालन हुनेछ। उच्च दबाव पानी धुवाँ प्रणाली योग्य स्टाफ वा फायर ब्रिगेड मैन्युअली प्रणाली बन्द गर्न सम्म सक्रिय रहन्छ।
मानक पम्प एकाई
पम्प एकाई एकल संयुक्त स्किड माउन्ट गरिएको प्याकेज हो जुन निम्नलिखित विधानसभाहरूबाट बनेको छ:
फिल्टर एकाई बफर ट्या tank्क (इनलेट प्रेशर र पम्प प्रकारमा निर्भर गर्दछ)
ट्याank्क ओभरफ्लो र स्तर मापन ट्याank्क इनलेट
रिटर्न पाइप (लाभको साथ आउटलेटमा लगिन सक्छ) इनलेट मनिफोल्ड
सक्सन लाइन मनिफोल्ड HP पम्प एकाई (हरू)
इलेक्ट्रिक मोटर (हरू) दबाब मनिफोल्ड
पायलट पम्प नियन्त्रण प्यानल
2.4.2 पम्प एकाई प्यानल
मोटर स्टार्टर नियन्त्रण प्यानल पम्प एकाई मा मानक माउन्ट गरिएको रूपमा छ। पम्प नियन्त्रक FM स्वीकृत हुन आवश्यक छ।
सामान्य पावर आपूर्ति मानकको रूपमा: 3x400V, H० हर्ट्ज।
पम्प (हरू) मानकको रूपमा सुरू रेखामा सिधा छन्। स्टार्ट-डेल्टा शुरू, नरम शुरूआत र फ्रिक्वेन्सी कन्भर्टर सुरू विकल्प विकल्पको रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ यदि हाल सुरू कम गरिएमा आवश्यक छ।
यदि पम्प एकाईले एक भन्दा बढी पम्पहरू समावेश गर्दछ भने, पम्पहरूको बिस्तारै जोड्नका लागि समय नियन्त्रण न्यूनतम सुरूवात लोड प्राप्त गर्नका लागि शुरू गरिएको छ।
आईपी ​​44 को ईress्ग्रि protection संरक्षण रेटिंगको साथ नियन्त्रण प्यानलसँग एक RAL 7032 मानक समाप्त छ।
पम्पहरूको सुरूवात निम्नानुसार गरिन्छ:
सुख्खा प्रणालीहरू - आगो पत्ता लगाउने प्रणाली नियन्त्रण प्यानलमा प्रदान भोल्ट-रहित सिग्नल सम्पर्कबाट।
गीला प्रणाली - पम्प एकाई मोटर नियन्त्रण प्यानल द्वारा निगरानी प्रणालीमा दबाव को ड्रप बाट।
प्रि-एक्शन प्रणाली - दुबैबाट संकेतहरू चाहिन्छ प्रणालीमा हावाको चापको ड्रप र एक भोल्ट-फ्री सिग्नल सम्पर्क आगो खोजी प्रणाली नियन्त्रण प्यानलमा प्रदान गरिएको।
2.5 जानकारी, तालिकाहरू र रेखाचित्रहरू
पानीको धुंध प्रणाली डिजाइन गर्दा अवरोधहरूबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउनुपर्दछ, विशेष गरी जब कम बहाव, साना थोपा आकार आकारको नोजलहरूको प्रयोग गर्दा उनीहरूको प्रदर्शनलाई अवरोधहरूले प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ। यो धेरै हदसम्म हो किनभने कोठा भित्र अशान्त हवाले फ्लक्स घनत्व प्राप्त गर्दछ (यी नोजलको साथ) धुरा अन्तरिक्ष भित्र समान रूपले फैलिन्छ - यदि अवरोध छ भने झूटले कोठा भित्र आफ्नो फ्लक्स घनत्व प्राप्त गर्न सक्षम हुँदैन। किनकि यो ठूला ठूला ठूलाहरूमा परिणत हुन्छ जब यो अवरोध र ड्रिपमा गाढा हुन्छ अंतरिक्षको बीचमा समान रूपमा फैलनु भन्दा।
आकार र अवरोधहरूको दूरी नोक प्रकारमा निर्भर गर्दछ। जानकारी विशिष्ट नोजलको लागि डाटा पानाहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
छवि २.१ नोजल
२.२.२ पम्प एकाई
l / मिनेट
नियन्त्रण प्यानलको साथ मानक पम्प एकाई
L x W x H मिमी
पम्प एकाई तौल
पावर: x x V००VAC H० हर्ट्ज १8080० आरपीएम।
छवि २.२ पम्प एकाई
२..3. Standard मानक भल्भ सम्मेलनहरू
मानक भल्भ सम्मेलनहरू छवि 3..3 मुनि संकेत गरिएको छ।
यस भल्भ सम्बन्धी समान पानी आपूर्तिबाट खुवाइएको मल्टि-सेक्शन प्रणालीहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ। यस कन्फिगरेसनले अन्य सेक्सनहरूलाई अपरेबल रहन अनुमति दिनेछ जबकि रखरखाव एक खण्डमा गरिन्छ।
छवि २.3 - मानक सेक्सन भल्भ असेंबली - खुला नोजल्सको साथ ड्राई पाइप सिस्टम
अघिल्लो: उच्च दबाव पानी धुंध आगो निभाउने प्रणाली (२.२)
NMS1001-I नियन्त्रण एकाई